Codeeynta baarlamaanka iyo nukliyarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Codeeynta baarlamaanka iyo nukliyarka
La daabacay torsdag 17 juni 2010 kl 11.00
Maanta ayaa la filayaa in baarlamaanku haa ugu codeeyo in dalkaan Iswiidhan laga dhisi karo warshado cusub ee koronto kuna shaqeeya awooda nukliyarka ,arrintaan ayaa ka danbeeysey soojeedin ay dawladu soo jeedisey lana rabo in lagu soo afjaro go'aan hore oo dalkaan Iswiidhan looga mamnuucay in laga dhisi karo warshada korontoo cusub oo ku shaqeeya awooda nukliyarka.
Soo jeedintaan ayaa xanbaarsan in warshadahaan cusub oo la dhisayaa ay badali doonaan tobanka warshadood ee korontada ka dhaliya awooda nukliyarka oo iyagu iminka dalkaan ka dhisan ka dib markii ay hawshooda ka fariistaan.
Qorshahaan ayaa sidoo kale xanbaarsan in aan la dhisin warshado toban ka badan ,dawlada dalkaanina aysan noqon doonin mid ka qeeybqaadata maalgalinta warshadahaas korontoo cusub ee awooda nukliyarka ku shaqeeya.
Shirkadaha lahaan doona warshadahaas awooda nukliyarka korontada ka dhaliya ayaa lagu soo rogey in ay bixiyaan magdhaw aan xadadneeyn haddii wax shil ahi ay ka dhacaan warshadahaas la dhisayo.
Soo jeedintaan uu baarlamaanku u codeeynayo ayaa salka ku heeysa heshiis la xiriira warshadaha korontada ee awooda nukliyarka ku shaqeeya oo ay wadagaareen bishii fabraayo ee sanadkii 2009-kii afarta xisbi oo iyagu iminka talada dalkaan haya,markaas oo uu xisbiga dhexee Center-ku ka tanaasuley mucaaradnimadii taariikhiga aheeyd oo uu mudaba uga soo horjeedey in dalkaan Iswiidhan laga dhiso warshada korontoo cusub oo awooda nukliyarka ku shaqeeya .
Soo jeedintaan ayaan meelmar noqoneeyn hadii afar xubnood oo ka tirsan xisbiyada talada dalkaan hayaa ay Maya ugu codeeyaan laakiin isjiidjiid badan ka dib hadda waxay u muuqataa in codeeynta qorshahaani uu aqlabiyad buuxda oo Haa ah baarlamaanka ka heli doonto.
Xisbiyada mucaaradka ayaa Maya ugu codeeyn doona soo jeedintaan baarlamaanka la soo hordhigey ,sidoo kalan waxaa jira laba xubnood oo ka tirsan xisbiga dhexee Center-ka oo iyaguna cadeeyey in ay cod diidmo ah ugu codeeyn doonaan .
Xubin kaloo isna ka tirsan isla xisbiga dhexe ee Center-ka iyo waliba mudane isaga baxay xisbiga Moodaraadka ayaa intii muddo ahba shaki uga jirey dhankii ay u codeeyn lahaayeen inkastoo ay labaduba hadda dib uga noqdeen diidmadoodii ,mid kuwaas ka mida ayaa ah Sven Bergström oo ka tirsan xisbiga dhexee Center-ka ,kaas oo isbadaley ka dib markii uu heley faahfaahin dheeraad ah oo soo jeedintaanla xiriirta.